नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : सूर्य बहादुर थापाका नाती सिद्धार्थ थापाले रा.प्र.पा. बिभाजनका सन्दर्भमा कमल थापाको यसरी काढेछन दोहोलो !
सूर्य बहादुर थापाका नाती सिद्धार्थ थापाले रा.प्र.पा. बिभाजनका सन्दर्भमा कमल थापाको यसरी काढेछन दोहोलो !
- सिद्धार्थ थापा
पशुपति समशेर राणाको नेतृत्वमा रहेको राप्रपा प्रजातान्त्रिकको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने सात जना केन्द्रीय सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेको दावी गर्दै कमल थापाले नयाँ दलको रुपमा स्थापित राप्रपा प्रजातान्त्रिकको दर्ता अमान्य भएको जिकिर गरेका छन् ।
यसको प्रतिक्रियामा म के भन्न चाहन्छु भने– कसैले एक पटक चेकमा हस्ताक्षर गरेर रकम भुक्तान भइसकेपछि तत्सम्बन्धी प्रयोजन अन्त्य हुन्छ । यहाँ के अस्वाभाविक छ भने निश्चित प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिहरुलाई थापाले हस्ताक्षर फिर्ता लिन दवाब दिइरहेका छन् ।
नयाँ दल गठन भइसकेको सन्दर्भमा राप्रपा प्रजातान्त्रिक निर्माण गर्न हस्ताक्षर गर्दै नगरेको भन्ने दावी गर्दै दुवैतर्फ खुट्टा अडाउने व्यक्तिहरुलाई फौजदारी अभियोगमा कारवाही चलाउनुपर्ने हो । चेकमा हस्ताक्षर गरेर रकम भुक्तानी भइसकेको सन्दर्भमा चेकमा हस्ताक्षर नगरेको वा गरेको जानकारी नभएको भनेर कुरा फेर्ने व्यक्तिउपर यस्तै कारवाही
सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध थापाको अपमानजनक अभिव्यक्ति वास्तवमा हास्यास्पद छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णय न्यायोचित छ्रैन भनेर आरोप लगाएलगत्तै सर्वोच्च अदालत नै जाने भन्ने उनको भनाई झनै हास्यास्पद छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला वैदेशिक शक्तिबाट मात्र नभएर घुसको लेनदेनबाट प्रभावित छ भन्ने हदसम्म राजेन्द्र लिङदेन पुगेका छन् । राप्रपा प्रजातान्त्रिक दर्ता गर्नु भनेर सर्वोच्च अदालतद्वारा निर्वाचन आयोगलाई जारी निर्देशन आर्थिक लाभबाट प्रभावित थियो भन्ने प्रमुख सचेतक कुन्ती शाहीको लाञ्छना कम आपत्तिजनक छैन ।
सत्यको पक्षमा बोल्न जस्तोसुकै अवस्था सामना गर्न तयार रहेको भन्ने लिङदेनको हकदावी छ । जबकि महामन्त्री र प्रमुख सचेतक जस्तो जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यक्तिहरुको अभिव्यक्ति सार्वजनिक जिम्मेवारीको कसीभित्र रहनु पर्दछ भनेर दोहोर्‍याइरहन पर्दैन ।
मेरा हजुरबुबा सूर्यबहादुर थापाले कमल थापासँगको एकता उनका लागि मात्र नभएर हाम्रा लागि समेत प्रत्युत्पादक हुने बताएको म स्मरण गर्दछु****************
यसका अतिरिक्त राजेन्द्र लिङदेनले राप्रपा प्रजातान्त्रिकको समर्थनमा ५६ हस्ताक्षर भएको ठहर गर्दै निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गरेका छन् । यी हस्ताक्षर सशरीर निर्वाचन आयोगमा सनाखत गरिएको थियो । र, यही तथ्य कमल थापाको विरुद्धमा निर्णायक सावित रह्यो । अदालतले सनाखत गरिएका हस्ताक्षरलाई मान्यता प्रदान गर्‍यो भने बाँकी हस्ताक्षर अदालतको निर्णय लगत्तै पेश गरिएको थियो ।
बहसको मूल विषय यहाँ के हो भने थापाले सम्पन्न भइसकेका सम्पूर्ण प्रक्रिया फिर्ता गर्ने चेष्टा गरेका छन् । जबकि दर्ता भएका र अभिलेखमा रहेका, विशेष गरेर अदालतको निर्णय फिर्ता हुन सक्दैन ।
कमल थापाको पतनको कारक के थियो त ? जवाफ सरल र स्पष्ट छ–उनले आफूलाई पार्टीभन्दा माथि राखे । अर्को अर्थमा उनले बग्गीलाई घोडाभन्दा अगाडि राखे जसकारण दुर्घटना निश्चित थियो । के उनी साँच्चै पार्टीको सिद्धान्तप्रति इमान्दार थिए ?
पार्टी एकतापछिका केन्द्रीय कार्यसमितिका बैठकहरुमा कमल थापाले विद्युतीय प्रस्तुति मार्फत संविधान संशोधन गर्नेका बाध्यता केन्द्रीय सदस्यहरुलाई प्रस्तुत गर्नुभएको थियो र सो प्रस्तुतिमा संविधान संशोधन राष्ट्रको हितमा छ भन्ने वहाँको टिप्पणी पनि थियो । उहाँ केपी ओलीको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री हुँदा भारतमा गएर लिखित प्रस्तावना संशोधनबारे भारतको नेतृत्व पंक्तिसँग छलफल गर्नुभएको थियो । त्यो छलफलपछि भारत र नेपालबीच नाकामा समस्या सहज हुँदै गयो । राष्ट्रवादीहरु जान्न चाहन्छन्- त्यो सम्झौता के थियो र ?
प्रचण्डको सरकारमा संविधान संसोधन सुनिश्चितताका लागि मधेशी दलहरुसँग सहमति गरेर सरकारमा जानुभयो र प्राप्त भएको औपचारिक जानकारीका अनुसार उहाँकै अगुवाइमा संविधान संशोधन लेखिएको थियो । तर, स्वाभिमानको नाममा उहाँले आपै+mले अनुमोदन गरेको संशोधन प्रस्तावलाई सत्तामा जाने बार्गेनिङको कडी बनाउनुभयो । यो रणनीतिक भूलले पनि उहाँलाई धेरै अवसरवादीको रुपमा छर्लङ्ग पार्‍यो ।
राप्रपा विभाजनमा नेपाली कांग्रेस र माओवादीको हात छ भन्ने प्रश्नमा यदि यो साँचो हो भने कमल थापाले कहाँ र कसरी भन्ने कुरा स्पष्ट गर्नुपर्दछ । थापाले लगाएको आरोप उनी आफैंले स्थापित गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने आम जनताले जानकारी पाउनुपर्छ ।
गणतान्त्रिक संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट भनेको र राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रस्तावक भएको कारण उनी निष्ठामा अड्न नसकेको घाम जतिकै छर्लङ छ । आफूसँग कुनै विकल्प नरहेको भन्ने उनले तर्क गर्न सक्छन् जसमा म असहमति जनाउदिन । यद्यपि उनले फरक मत दर्ता गर्नुको साथै केपी ओली सरकारलाई बाहिरबाटै समर्थन गर्न पनि सक्थे । उनले प्रचण्ड सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय लिन सक्थे तर पार्टीभित्र कुनै सल्लाह नै नगरी हतारमा सरकारमा सहभागी बने ।
स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारमा सहभागी भएको भन्ने थापाको दावी भए पनि कार्यसम्पादन समितिको बहुमत विरुद्ध राष्ट्रपति विद्या भण्डारी सँगको भेटपछि उनले सरकार छाड्ने निर्णय गरे । सोही दिन दुई चरणमा सम्पन्न कार्यसम्पादन समितिको वैठकबीच राष्ट्रपति सँगको भेटपश्चात थापाले सरकार छाड्ने निर्णय किन गरे भन्ने तथ्य रहस्यको गर्भमै छ ।
***************डा. तुलसी गिरीसँगको प्रथम भेटमा थोरै शब्दमा धेरै बताएको म सम्झछु– कि त कमल थापालाई हटाउनु, नत्र अर्को विकल्प रोज्नु****************
सार्वजनिक रुपमा सम्मानजनक उपस्थितिको तर्क जति नै प्रस्तुत गरे पनि कमल थापाले शेरबहादुर देउवा सरकारमा समावेश हुन सक्दो प्रयास गरेका थिए । यद्यपि प्रचण्ड सरकार त्यागेपछि काठमाडौं र ललितपुरमा एमालेसँग चुनावी गठबन्धन कायम गर्ने रणनीतिक त्रुटीका कारण थापाको छवि झन् ओरालो लागिसकेको थियो ।
राप्रपा विभाजनमा अहमताको पनि प्रभाव रह्यो । संसदीय दलको बैठकमा थापाले आफूलाई निरंकुश प्रवृति भएको सामन्तीका रुपमा प्रस्तुत गरेकै कारण उनीसँग सहकार्य गर्न इच्छुकहरुको मन परिवर्तन भयो ।
संसदीय दलको बैठकहरुमा विगतमा प्रदर्शित असहमतिलाई लिएर सांसदहरुमाथि भौतिक आक्रमण भएमा आफू जिम्मेवार नहुने भन्ने जस्ता धम्कीकै कारण थापाप्रति ठूलो आक्रोश सिर्जना भयो ।
राप्रपा विभाजनमा वाह्य शक्ति जिम्मेवार छन् ? यदि त्यसो हो भने कहाँ, कसरी र कुन हदसम्म वाह्य शक्तिको भूमिका रह्यो भन्ने अवस्था कमल थापाले स्पष्ट किटानी गर्नुपर्छ ।
अनैतिक मानिसका लागि राष्ट्रियताको नारा अन्तिम सुरक्षाकवज हो भन्ने भनाइ छ । यस अवस्थामा पश्चिमा शक्तिको आर्थिक प्रभावमा परेर थापाले धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा मतदान गरे भन्नु न्यायसंगत हुन्छ त ? तर, हामी त्यसो भन्दैनौं । तथापि राष्ट्रियताको कार्ड केही हदसम्म मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ, यसले सधैं, सबै कमजोरीबाट सुरक्षित राख्न सक्दैन ।
राप्रपा विभाजनमा नेपाली कांग्रेस र माओवादीको हात छ भन्ने प्रश्नमा— यदि यो साँचो हो भने कमल थापाले कहाँ र कसरी भन्ने कुरा स्पष्ट गर्नुपर्दछ । थापाले लगाएको आरोप उनी आफैंले स्थापित गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने आम जनताले जानकारी पाउनु पर्दछ ।
के हामी एकजुट हुन सक्छौं ? राजनीतिमा असम्भव भन्ने नभए पनि मिलन हुँदैन भन्नेमा म विश्वस्त छु । किन ? मेरा हजुरबुबा सूर्यबहादुर थापाले कमल थापासँगको एकता उनका लागि मात्र नभएर हाम्रा लागि समेत प्रत्युत्पादक हुने बताएको म स्मरण गर्दछु ।
अब बाटो के त ? अबको विकल्प भनेको सम्र्वद्धनवादी शक्तिबीचको एकता नै हो । तर, यो कमल थापाको नेतृत्वमा सम्भव छैन । सूर्यबहादुर थापाको अनुपस्थितिमा उनलाई अवसर प्राप्त भएकै हो तर उनले आफ्नो जिम्मेवारीको गाम्भीर्यता बुझ्न सकेनन् ।
सूर्यबहादुर थापा, पदमसुन्दर लावती, रवीन्द्रनाथ शर्मा, राजेश्वर देवकोटा र जोगमेहर श्रेष्ठ जस्ता पार्टीका संस्थापक नेताहरुको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्दै राप्रपा नेपालसम्वद्ध दिवंगत नेताको भूमिका उजागर गरेर राप्रपाको इतिहास तोरमरोड गर्ने गल्ती उनीबाट भएको देखियो । चन्द्रबहादुर गुरुङको चर्चा गर्ने क्रममा सूर्य बहादुर थापाको योगदान र विरासत भूल्न सकिन्छ र ?
हजारौं लाखौं नेपालीहरु राप्रपा सफल भएर बृहत आकार ग्रहण गरेको हेर्न चाहन्छन् । यद्यपि कमल थापाको स्वार्थ र उनको अघिपछि गर्ने जनमतविहीन चाकरबाट मुक्त भएर मात्रै राप्रपाले विकसित स्वरुप ग्रहण गर्न सक्दछ ।
डा. तुलसी गिरीको नेपाल पुनरागमनले कमल थापालाई लाभ पुग्छ भन्ने मलाई लागेको थियो । तर, डा गिरीसँगको प्रथम भेटमा वरिष्ठ नेताले थोरै शब्दमा धेरै बताएको म सम्झछु– कि त कमल थापालाई हटाउनु, नत्र अर्को विकल्प रोज्नु । अवसरवादीले राप्रपाको नेतृत्व गरिरहेका कारण राप्रपालाई जनताले अवसरवादी राजनीतिक दलको रुपमा चित्रण गर्नेछन् ।
डा. गिरीको भविश्यदर्शी वाणी मेरा लागि मात्र नभएर सम्पूर्ण राप्रपा परिवारका लागि नै खतराको घण्टी सावित भयो । किनभने, कमल थापाको साँघुरो नेतृत्व र जनमत नभएका उनका चाकरका कारण सबैको भविष्यमाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको थियो ।
(लेखक राप्रपा प्रजातान्त्रिकका युवा नेता हुन् र उनको यो लेख सान्दर्भिक ठानेर अनलाइन खबरबाट लिइएको हो )